China umthamo Big ingqolowa umgubo lokusila ukwenziwa kunye mveliso | IChinatown
Kwicandelo lokucoca, samkela ukomisa uhlobo lokucoca iteknoloji.it ihlala ibandakanya ukuhluza amaxesha ama-2, ukukhafula amaxesha ama-2, amaxesha amabini okuxulutywa ngamatye, ukucoca ixesha elinye, ama-5 umnqweno, amaxesha ama-2 okunciphisa, amaxesha ama-magnetic
ukwahlukana njalo njalo.Kwicandelo lokucoca, kukho iinkqubo ezininzi zokuzinqanda ezinokunciphisa uthuli lokutshiza kumatshini kunye nokugcina imeko yokusebenza. Iphepha lokuhamba elingasentla elinokususa uninzi
Icandelo lokucoca alikho kwi-onley efanelekileyo yengqolowa engeniswe ngaphandle kokufuma okuphantsi kodwa ikwanakho ingqolowa emdaka evela kubathengi balapho.
Kwicandelo lokugaya, zine iindidi zeenkqubo zokuguba ingqolowa ngomgubo. Yinkqubo ye-5-Break, inkqubo yokuNcitshiswa kwe-7, inkqubo ye-2-Semolina kunye ne-2-Tail system. Abahlambululi bayilelwe ngokukodwa ukufumana i-semolina emsulwa ngakumbi ethunyelwe kuNciphiso ephucula umgangatho womgubo ngomda omkhulu. Iizileyi zokuNciphisa, iSemolina, kunye neenkqubo zomsila zii-roller ezigudileyo eziqhutywa kakuhle. Uyilo lonke luya kuqinisekisa i-bran encinci exutywe kwi-bran kwaye isivuno somgubo sandisiwe.
Ngenxa yokuba inkqubo yokuphakamisa i-pneumatic eyenziweyo kakuhle, yonke into yokusila idluliswa ngumqhubi woxinzelelo oluphezulu. Igumbi lokugaya liya kuba licocekile kwaye licocekile ukwamkelwa komnqweno.
Icandelo lokuDibanisa umgubo
Inkqubo yokuxuba umgubo ikakhulu inenkqubo yokuhambisa umoya, inkqubo yokugcina umgubo omninzi, inkqubo yokudibanisa kunye nomgubo wokugqibela wokuhambisa inkqubo.Yindlela egqibeleleyo nesebenzayo yokuvelisa umgubo ofanelekileyo kunye nokugcina uzinzo lomgangatho womgubo. Inkqubo yokuxuba, kukho imigqomo emithandathu yokugcina umgubo. Umgqomo kwimigqomo yokugcina uvuthelwa kwimigqomo emithandathu yokupakisha umgubo kwaye upakishwe ekugqibeleni. Umgubo uya kudityaniswa kakuhle xa ukhutshwa kwimigqomo yomgubo. Isikere sokuhambisa siya kulawulwa sisiguquli sokuhamba Ukuqinisekisa umgubo umgubo ikhutshwa ngumthamo ilungelo proportion.The umgangatho umgubo iya kuzinza emva inkqubo ukuxubana nto leyo ebaluleke kakhulu umgubo milling.In Ukongeza, bran iza kugcinwa imigqomo 4 bran kunye zipakishwe ekugqibeleni.
Umatshini wokupakisha uneempawu zokulinganisa ngokuchanekileyo okuphezulu, isantya sokupakisha okukhawulezayo, ukusebenza okuthembekileyo nokuzinzileyo.Ukunobunzima kunye nokubala ngokuzenzekelayo, kwaye unokuqokelela ubunzima bomatshini wokupakisha unomsebenzi wesiphoso sokuziqonda. Umatshini wokupakisha unendlela etywiniweyo yendlela yokubopha ibhegi, whih unokuthintela umbandela ekuphumeni.Ukupakisha kubandakanya i-1-5kg, 2.5-10kg, 20-25kg, 30-50kg. Abaxhasi banokukhetha imigaqo yokupakisha eyahlukeneyo ngokweemfuno.
Ulawulo loMbane noLawulo
Kule nxalenye, siya kubonelela ngombane wolawulo lwekhabhathi, intambo yomqondiso, iitreyini zentambo kunye neleli zekhebula, kunye nezinye izinto zokufaka umbane. Intambo yesitishi kunye namandla emoto ayifakwanga ngaphandle komthengi oyimfuneko ngokukodwa. Inkqubo yolawulo lwePLC lukhetho olukhethiweyo kubathengi.Inkqubo yolawulo lwePLC, bonke oomatshini balawulwa nguMlawuli oCwangcisiweyo oLawulayo onokuqinisekisa ukuba oomatshini bahamba kakuhle nangokutyibilikayo. Inkqubo iya kwenza izigqibo ezithile kwaye isabele ngokufanelekileyo xa nawuphina umatshini enesiphene okanye emiswe ngokungaqhelekanga. Ngexesha elifanayo iya kuvusa kwaye ikhumbuze umqhubi ukuba asombulule iimpazamo.Schneider uthotho lwamalungu ombane asetyenziswa kwikhabhathi yombane. Uphawu lwe-PLC luya kuba yi-Nokia, i-Omron, iMitsubishi kunye nolunye uphawu lweLizwe. Indibaniselwano yoyilo olulungileyo kunye neendawo zombane ezinokuthenjwa ziqinisekisa ukuba yonke into yokusila isebenza kakuhle.
ULUHLU LOMSEBENZI WOBUGCISA
Umthamo (t / 24h)
Model mqengqeleki Mill
Isithuba LxWxH (m)
Umoya / umbane
Egqithileyo I-Twin Screw feeder yevolumu
Okulandelayo: Ityesi Magnet
Icompact Corn Mill